အရောင်းဌာန၏ဘယ်နိဂုံး? | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 16, 2012 တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 19, 2012 Douglas Karr
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများကိုရှာဖွေရန်ဒီဇိုင်းဆွဲလေ့ရှိသည် နောက်ထပ် လက်ရှိဖောက်သည် ဦး ဆောင်သို့မဟုတ် upsell ။ ဖောက်သည်များနှင့်မကြာခဏတွေ့ရလေ့ရှိသည့်ပြofနာတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်အရောင်းပြခန်း၏မှားယွင်းသောအဆုံးတွင်မကြာခဏအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတော်တော်များများသည်သူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့တစ်လလျှင် visitors ည့်သည်များလျော့နည်းသွားသည်။ သို့သော် အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်သူတို့လာသည့် of ည့်သည်များထက်နှစ်ဆပြောင်းလဲနိုင်သည်ဆိုလျှင်အလွန်အောင်မြင်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသောနည်းပညာအများစုသည်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်များကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ကိုလျှော့ချရန်တည်ဆောက်ထားသည်။ ကျနော်တို့ကအဲဒါကို lembut လို့ခေါ်တာကိုအမြဲတမ်းအံ့သြမိတယ်၊ ဒါဟာနေရာတကာမှာကြီးမားတဲ့အလားအလာရှိတဲ့ colander တစ်ယောက်ပါ။ အစား၏အပေါ်ဆုံးတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်တွင်းများနှင့်ပြည့်နှက်သည့်အထဲသို့သို့ပို့ဆောင်ခြင်းထက်ကားကိုမည်သည့်နေရာတွင်နည်းပညာကိုအသုံးပြုမည်နည်း။
webmaster များ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပေါ်တွင် click-through နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်ကူညီရန်ကိရိယာများသည်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ သင်၏ဆိုဒ်သို့မည်သည့်အသွားအလာရှာဖွေမှုမှမည်မျှသယ်ဆောင်လာသည်ကိုသင်ဂရုစိုက်ပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်၏လက်ရှိအဆင့်တွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှုန်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ ဒါကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရပါသလား
URL အတိုကောက် သင်၏လူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာများသည်မည်မျှထိရောက်မှုရှိသည်ကိုသင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို Bit.ly ကဲ့သို့သင်ပေးနိုင်သည်။ လူတွေကသူတို့သုံးတဲ့အချက်အလက်တွေကို Facebook ကစစ်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာမင်းသိလား Edgerank algorithm ကို ... နှင့်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ပင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် အဘယ်သူမျှမ သင်၏လူမှုမီဒီယာကြိုးပမ်းမှုများကိုအမှန်တကယ်ပြသနေခြင်းလော။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကုမ္ပဏီများ Right On Interactive ကဲ့သို့စက်ဝန်းကိုတိုစေပြီးသင်၏ ဦး ဆောင်မှုကိုဂိုးသွင်းနိုင်ရန်ကူညီသည့်နည်းစနစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသောနည်းပညာများကိုတီထွင်နေကြသည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့နှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာဆက်သွယ်နိုင်မည် အသုတ်နှင့်ပေါက်ကွဲမှု မောင်းနှင်စေခြင်းငှါနည်းလမ်းများကတော့အထဲက ဦး ဆောင်သည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများ Delivra ကဲ့သို့သောအီးမေးလ်နှင့် SMS ၀ န်ဆောင်မှုများကတုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်နိုင်ပြီးလက်ရှိဖောက်သည်များအားသူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများ - အဆောက်အအုံအာဏာ၊ တည်ဆောက်မှုနှင့်သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ဦး ဆောင်မှုရရှိခြင်းအပေါ်မည်သို့မည်ပုံပညာပေးနိုင်သည်ကိုပေးသည်။
အွန်လိုင်းစစ်တမ်းပလက်ဖောင်းများ သင်၏ဖောက်သည်ဝယ်သူ SurveyMonkey ကဲ့သို့ Zoomerang သည်သင်၏အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများသိသိသာသာတိုးတက်စေရန်လိုအပ်သည့်ထောက်လှမ်းရေးကိုသင့်အားပေးနိုင်သည်။ သင်၏အကြောင်းအရာများကိုတိုးတက်စေခြင်းအားဖြင့်သင်သည် ၀ ယ်ယူမှုအတွက် ဦး ဆောင်သူများကိုပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးသင်၏ဖောက်သည်များအားစနစ်တကျ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေကြောင်းသေချာစေနိုင်သည်။
Software ကိုအဆိုပြုချက်ကို Tinderbox ကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများသည်သင်၏အဆိုပြုလွှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏တုန့်ပြန်မှုများကိုခြေရာခံပြီးသင်၏အဆိုပြုလွှာများကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်ကိုနားလည်ခြင်းဖြင့်စကားဝှက်များကိုမြန်ဆန်စွာနှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာမောင်းနှင်နိုင်သည်။
သင်၏ Sales Funnel ကိုကြည့်သောအခါသင်၏မဟာဗျူဟာများသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည် ယုန်? ပိုပိုပြီးပရိသတ်ကိုမောင်းထုတ်ရန်ကြိုးစားမည့်အစားသင်၌ရှိပြီးသားဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာကောင်းများကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ကြည့်ရကျိုးနပ်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီ 17, 2012 မှာ 2: 47 AM
ဒါ သိပ်မှန်တာပဲ Douglas။ ပြီးတော့ အရေးအကြီးဆုံးက မင်းရဲ့ ဆောင်းပါးကို ငါဖတ်ရတာ သဘောကျတယ်။ ပရိသတ် ပိုများလာစေရန်၊ သင့်တွင်ရှိပြီးသား ဖောက်သည်များနှင့် အလားအလာများကို အသုံးချခြင်းမပြုဘဲ ဖြစ်နိုင်ခြေကောင်းများ ရှိပါသည်။ အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာဖြစ်လာပြီး Inc Magazine သည် ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီကို အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်နေသောကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုအဖြစ် မဲပေးမဆုံးဖြတ်မီ အချိန်အတော်ကြာ လေ့လာသိရှိခဲ့ရသည်မှာ ဤနည်းပညာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၎င်း၏အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝဘ်ဆိုဒ်အတွက် ပရိသတ်ပိုမိုများပြားလာမည်မှာ သေချာပါသည်။
ဇန်နဝါရီ 17, 2012 မှာ 3: 05 AM
မင်းရဲ့ကြင်နာတဲ့စကားအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ @DanielMilstein:disqus ! ပြီးတော့ ဟိုမှာ စပမ်းတွေများများလောင်းထည့်မယ့်အစား ငါတို့ရထားတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို လှည့်ဖို့ အာရုံစိုက်လိုက်ရင် အဲဒီနေရာမှာ ဆူညံသံတွေ ဘယ်လောက်နည်းသွားမလဲဆိုတာ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။